July 2012 ~ ဆုံနေကြ
Monday, July 30, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့် နှစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ချယ်ရီပန်း တွေ ပွင့်ချိန် မတ်လ ကုန်လောက် ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားဖို့ရှိတယ်လို့ AP သတင်း တပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လာစဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့ကို ဗဟိုပြု၍ အင်အား အသင့်အတင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်
Sunday, July 29, 2012 လပြည့်ဝန်း 1 comment
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ၈နာရီ ၅၁မိနစ် ၃၀ စက္ကန့်အချိန်တွင် မန္တလေးမြေငလျင်စခန်းမှ
အနောက်မြောက်ဘက် ၁၃၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ဟားခါးမြို့၏
အရှေ့တောင်ဘက် ၁၄မိုင်ခန့်အကွာကို ဗဟိုပြု၍ ရစ်ချတာစကေး ၅.၈
အဆင့်ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသော မြေငလျင်တခုလှူပ်ရှားသွားကြောင်း
တိုင်းတာရရှိသည်ဟု မန္တလေးမြို့ရှိ မိုးလေ၀သမှတ်တမ်းနှင့် မြေငလျင်ဌာနမှ
ယင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအား မန္တလေးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ
လည်း ခံစားသိရှိလိုက်ကြသည်ဟု သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တွင်လည်း တစ်မြို့လုံး လှုပ်ခတ်မှုရှိခဲ့
ကြောင်းနှင့် လှုပ်ခတ်ချိန်မှာ အနည်းငယ်သာကြာမြင့်သည်ဟု ဟားခါးမြို့မှ
မုံရွာမှာလည်း လှူပ်တယ်ကြားတယ်။”ဟု မန္တလေးမြို့မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက
ယနေ့မနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၈နာရီ၊၅၂မိနစ်တွင် မန္တလေးမြို့၌ ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားကြောင်းသိရသည်။ ငလျင်ဒါဏ်ကြောင့် ပျက်စီးထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းဒေသခံများမှပြောပြခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့သည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွှေ့ကျောနှင့်နီးကပ်စွာရှိနေ၍ ငလျင်ဒါဏ်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းကို ပညာရှင်တို့တွက်ဆထားကြသည်။ မန္တလေးမြို့တွင်လှုပ်ခတ်ခဲ့သောငလျင်အင်အားကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အလားတူ မနက်၈နာရီ မိနစ်၅၀အချိန်ခန့်တွင် မုံရွာမြို့တွင်လည်းငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
ယနေ့မနက် Papua New Guinea ကျွန်းရဲ့ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၆နာရီအချိန်ခန့်တွင် ငလျင်အင်အား ၆.၆ မဂ္ဂနီကျူ့အဆင့်ရှိငလျင်လှုပ်ခတ်သွားကြောင်းကိုအမေရိကန် USGS စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
By/ Aung Pan
မြန်မာ လုပ်သားများကို ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူရန် ထိုင်းပြင်ဆင်
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာ ရေလုပ်သားများ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၉
ထိုင်းအစိုးရ အနေဖြင့် နှစ်နိင်ငံ အစိုးရချင်း စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ မြန်မာနိင်ငံမှ လုပ်သားများကို ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြင့် ခေါ်ယူရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းကို ရုပ်သံလိုင်း ၇ တွင် ကြည့်လိုက်ရကြောင်း ဘန်ကောက် မဟာချိုင်မှ အလုပ်သမားအရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဆုန်ဆပ်က မြန်မာ အလုပ်သမားများကို နှစ်ဖက်အစိုးရ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာ ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကန်ထရိုက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် အများဆုံး လေးနှစ် ကြာမည်ဖြစ်ကာ မြန်မာ အလုပ်သမားများကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် သက်တမ်း တိုးပေးရန် မရှိဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိ ထိုင်းအစိုးရ အနေဖြင့် တရားမ၀င် ရောက်လာသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ ယာယီ န်ိင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးကာ နှစ်အလိုက် သက်တမ်းတိုး စနစ်အစား ကန်ထရိုက်စနစ်ကို သုံး၍ ခေါ်ယူသည့် ပုံစံသို့ပြောင်းရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် ညှိုနှိုင်းခဲ့ပုံ ရကြောင်း ၄င်းက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေး ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ခေါင်ဆောင် ဦးအောင်မင်းက ထိုင်းတွင်မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သာ နှစ်သန်းခန့်ရှိပြီး ၄င်းတို့ ပြန်လာရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးအတွက် Peace Centre နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွုက်ပေးသွားရန် ရှိသည်ဟု ယခင်အပတ်က နိင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုသွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိရာသီဥတု အနေအထားအရ မြစ်ရေကြီးတာကို သတိထားရမယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိရာသီဥတု အနေအထားအရ မြစ်ရေကြီးတာကို သတိထားရမယ်လို့ မိုး လေ ၀ သ ပညာရှင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တခုလုံး၊ ၇န်ကုန်၊ပဲခူး၊မွန်၊ကရင်စတဲ့ ဒေသတွေမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုမြင့်နေတာ ၁၀ ရက်လောက် ရှိသွားပြီ၊မြှပ်တဲ့နေရာတွေလဲ မြှပ်ကုန်ဘီ၊ ရေမကြီးတဲ့နေရာတွေမှာလဲ မြေနိမ့်ပိုင်းနဲ့ လယ်တွေ ရေမြှပ်တယ်။ မြှပ်ဖို့ အလားအလာလဲရှိနေတယ်လို့ မိုးလေ၀သပညာရှင် ဦးထွန်းလွင် က ပြောပါတယ်။
အခုရေကြီးနေတာဟာ မုတ်သုန်ကာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပြီး၊တတိယအကြိမ် ရေကြီး ကာလ စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာလတွေမှာ ပိုပြီးသတိထားရမယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။
လတ်တလော မိုးကြီးတာနဲ့ မြစ်ရေကြီးတာကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊လားရှိုး၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ထားဝယ်နဲ့ ပဲခူးမြို့တွေမှာ ရေကြီးရေလျှံတာတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ကသာမြို့ ရွှေမေတ္တာလမ်းရှိ ဗယ်လဲင်တိုင်း (Valentine) ကာရာအိုကေ လုပ်ငန်းရှင် ဦးမြင့်မောင်က လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်ကို အတွဲ သုံး အမှတ် ၈၄ နဲ့ ၈၈ ပါ ရေးသားချက်များနဲ့ပတ်သက်လို့အသရေဖျက်မှု နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ရာမှာ အမှုကို တရားသူကြီးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီး ၄၈၇/၁၂ နဲ့ လက်ခံလိုက်လို့ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ မှာ စတင်ကြားနာr\_မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်နဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဟာဂျူလီ (ကသာ) တို့ကိုလည်း တရားမကြောင်းနဲ့ စွဲဆိုထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် ဥပဒေ အကျိုးဆောင် ဖြစ်သူ ဦးသိန်းသန်းဦးက ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့အခုလို အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ညှိနှိုင်းရန် ALD အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုဆို
စစ်တွေ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD အနေဖြင့် ရခိုင်ပါတီများ ပူးပေါင်းရေး ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် ပါတီဌာနချုပ် ဆိုင်းဘုတ်
တင်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပါတီ် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦးက သတင်းထောက်များအား ပြောကြားလိုက်သည်။
ALD နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP)တို့ ပူးပေါင်းရေးကိစ္စကို ရခိုင်ပြည်သူများ
မျှော်လင့်နေချိန်တွင် ALD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦထွန်းညို က ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်
“ရိုးသား မှန်ကန်မယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့မူ သဘောထားကို လက်ခံမယ်ဆိုရင်
ပေါင်းစည်းဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ ပါတီတရပ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့က မူနဲ့အညီ ရပ်တည်နေရတာမို့လို့ မူသဘောထား မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်တော့ ပေါင်းစည်းဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မူသဘောထားတွေကို လက်ခံမယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်း ဆွေးနွေးပြီးတော့ ပူးပေါင်းသွားဖို့ အဆင်သင့် ရှိပါတယ်” ဟု ဦးထွန်းညို က ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အ၀ရှိသည့် ပြည်နယ် ပေါ်ပေါက်ရေး၊ အရာရာတွင်
ပြည်နယ်အစိုးရက ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့် ရရှိရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး ဟူသော မူ ငါးရပ်ကို ဆက်လက်စွဲကိုင်ထားကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။
“ပထမပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ပါတီ မှတ်ပုံတင်မကျခင်မှာ RNDP က ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ကျပြီး ဒီဘက်ကာလမှာ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ပါတီက ဗဟိုကော်မတီ ငါးဦး အသင့်ပြင်
ထားတယ်။ ဆွေးနွေးဖို့လည်း ကမ်းလှမ်းထားတာ ရှိတယ်။ ဒီကနေ့အထိ သူတို့ဘက်က ဆက်သွယ် လာတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ ရိုးသားမှန်ကန်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုး အမှန်တကယ် လက်တွေ့ လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပါတီကိုယ်စားပြု
လေးငါးယောက်လောက် တွေ့ပြီးတော့ ဆွေးနွေးမှုကို စလို့ ရတာပဲ။ ပါတီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့
ဆွေးနွေးမှုမျိုးတော့ ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ” ဟု ဦထွန်းညိုက ALD ၏ သဘောထားကို ပြောသည်။
ပါတီနှစ်ခု ပူးပေါင်းရေးအစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ RNDP အတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်ပြည်စိုး အား မေးမြန်းရာ ၎င်းတို့
ပါတီအနေဖြင့် ALD ပါတီ ထပ်မံမှတ်ပုံမတင်မီ ကတည်းကပင် ပူးပေါင်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရေး
ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းပြီး ALD နှင့် ဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းထားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလည်း ယင်းမူအတိုင်းပင် ဆက်လက် ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေး၊ ပူးပေါင်းရေး ဆိုသည်မှာ ပါးစပ်က ပြောနေရုံနှင့် ပြီးပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်မှသာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသွားခဲ့သည်။
RNDP မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အမတ်နေရာ ၃၅ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သော
နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သလို ALD မှာလည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အမတ်နေရာ ၁၁ ဖြင့် အများဆုံး အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ပါတီဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ၏ တဖက်သတ် ပါတီဖျက်သိမ်းခြင်းကို ခံရကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလတွင်မှ ပါတီ ပြန်မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်သူ အများစုက ထိုနှစ်ပါတီအား ရခိုင်လူမျိုးများ၏ အကျိုးစီပွားကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီကြီးတရပ်အဖြစ် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ခရီးစဉ်
ယနေ့ ( ဇူလိုင်လ၊ ၂၉ ရက် )၊ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီက မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ မြို့နယ်ရုံးသို့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ သွားရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြစဉ် အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၁၆လမ်း ( ၈၇လမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား)ရှိ ပင်လယ်တိုက်၊ ရွှေမန်းအုတ်ကျောင်း၊ နှလုံးလှပင်လယ် ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် အခမဲ့ ပညာဒါနစာသင်ကျောင်း အတွက် စာအုပ်စာတမ်း၊ စာရေးကိရိယာနှင့် ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများကို ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
နှလုံးလှပင်လယ် ကုသိုလ်ဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးသင် အခမဲ့ ပညာဒါနစာသင်ကျောင်းအတွက် လှူဒါန်းခဲ့သော ပစ္စည်းများမှာ သူငယ်တန်းမှ အဌမတန်းအတွက် ကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ် အစုံ ၂၀ စီ ၊ လေးကြောင်းမျဉ်းစာအုပ် ဒါဇင် ၂၀၊ ဗလာစာအုပ် ဒါဇင် ၃၀၀၊ ဘောလ်ပင် ဒါဇင် ၁၅၀၊ ခဲတံ ဒါဇင် ၂၀၀၊ ခဲဖျက် ဒါဇင် ၂၀၊ ပေတံ ဒါဇင် ၂၀၊ အလယ်တန်းသုံး ကွန်ပတ်စ် ဘူး ၁၀၀၊ ၀ှိုက်ဘုတ် ၂ ချပ်၊ ၀ှိုက်ဘုတ်မတ်ကာပင် တစ်ဒါဇင်နှင့် မင်အိုးတို့ ဖြစ်ပြီး
နှလုံးလှပင်လယ် ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းအတွက် လှူဒါန်းခဲ့သောပစ္စည်းများမှာ လူနာများထိုင်ရန် ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံ အလုံး ၁၀၀၊ လူနာ စမ်းသပ်ကုတင် ၃ လုံး၊ သွေးပေါင်ချိန် ကိရိယာ ၃ ခု၊ စားပွဲနှင့် ထိုင်ခုံ တစ်စုံတို့ ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၁၆လမ်း ( ၈၇လမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား)ရှိ ပင်လယ်တိုက်၊ ရွှေမန်းအုတ်ကျောင်း၊ နှလုံးလှပင်လယ် ကုသိုလ်ဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးသင် အခမဲ့ ပညာဒါနစာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားလေးများ ( ဇူလိုင်လ၊ ၂၉ ရက် )
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ အပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ပူးပေါင်းစီစဉ်နေတဲ့ ၂၄ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး လူထု
လှုပ်ရှားမှု နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့မှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်ရေး အစည်းအဝေးအပြီးမှာ သံဃာတော်တွေက သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိမိတို့ကလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုတာ လက်တွေ့
ပြသချင်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့လည်း အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်နေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ဝင် ကိုပြုံးချိုက ပြောပါတယ်။
"အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးမှာ အားလုံး ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်၊ နောက်ပြီး ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ နိုင်ငံနဲ့ အ၀န်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာ လှုပ်ရှားခဲ့သူများအားလုံးလည်း ဒီအပြောင်းအလဲတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေနဲ့ စုစုစည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် အနေအထားကို ဆရာတော်တွေကလည်း သဘောပေါက်တဲ့အတွက် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံကြတာပါ။"
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက် အတွင်း ကျင်းပမယ့် ရှစ်လေးလုံး အခမ်းအနားကို ပရိသတ် ထောင်နဲ့ချီ တက်ရောက်နိုင်အောင် စီစဉ် ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ ကိုပြုံးချိုက ပြောပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ စည်းကမ်းတကျ သတင်းယူနိုင်အောင် စီစဉ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
(Photo: 88 Generation Students Group
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ အလယ်တိုက်ကြီး၊ ဒက္ခိဏာရာမ ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်တွင် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြို ဝါဆို သင်္ဃန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ ကျင်းပရန်အတွက် ဇူလိုင်လ၊ ၂၈ ရက်က
ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်။)
၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြို ဝါဆိုသင်္ဃန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည့် မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ အလယ်တိုက်ကြီး၊ ဒက္ခိဏာရာမဘုရားကြီး ကျောင်းတိုက် ဖြစ်ပါသည်။ (Photo Courtesy of 88 Generation Students Facebook)
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အကြောင်းအရာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားကျင်းပ
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အကြောင်းအရာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားအား ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်
ယင်းအခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဟန်စိန်၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးချိုသန်းမောင်၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့လေကြောင်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးချိုသန်းမောင်က မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ နောက်ခံသမိုင်း၊ မူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၏ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Conceptual Plan၊ ပုဂ္ဂလိကအပိုင်းမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျာထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်၊ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ (Scope of work) ၊ တင်ဒါတင်သွင်းမည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြရမည့် အခြေခံအချက်များစသည့် အကြောင်းအရာများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းစဉ် ၄ ခုအား ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးချိုသန်းမောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ်
ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ လမ်းမတော်နယ်မြေ (ရွာသစ်ချောင်းနှင့် စဥ့်အိုးတန်းကြား)တွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပြည်တွင်းခရီးသွားဆိပ်ကမ်းများ (Inland Port Terminal)အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆူးလေဆိပ်ကမ်းတံတား အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တို့အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သေတ္တာနှင့် အထွေ ထွေကုန်တင်သင်္ဘောကြီးများ ဆိုက် ကပ်နိုင်သည့် ဆိပ်ကမ်းအဖြစ် အဆင့်မြင့်ပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ခရီးသည်တင် ဆိပ်ခံဗောတံတားအား အဆင့်မြင့် ခေတ်မီ ခရီးသည်တင် ဆိပ်ခံတံတား Modernized Passanger Terminal အဖြစ် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဆိပ်ကမ်းရှိ ကမ်းပါးထိန်း ရေကာတံတိုင်းအား မြစ်ဘက်သို့ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆိပ်ခံဗောတံတားများအား အဆင့်မြင့် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် နောက်ခံမြေပေါ်တွင် အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ရေးနေရာများနှင့် ဆိုင်ခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ဒါတင်သွင်းမည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီများအား ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Joint Venture(J.V)စနစ်၊ BOT စနစ်များဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ကနဦးလျာထားသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအချို့အပေါ် ခြွင်းချက်ပြု၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှည်ကြာစွာပေးထားခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက် အခွန်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသကဲ့သို့ အခွန်တိမ်းရှောင်မှု၊ မသမာမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပိုမိုကြီးထွား လာစေနိုင်
မြေဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်သည့် ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေစေတီတော် အနီးဝန်းကျင်ကို တွေ့ရစဉ်
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအချို့အပေါ် ခြွင်းချက်ပြု၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှည်ကြာစွာ ပေးထားခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက် အခွန်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသကဲ့သို့ အခွန်တိမ်းရှောင်မှု၊ မသမာမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပိုမိုကြီးထွားလာစေနိုင်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ အကြံပြု
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအချို့(ဥပမာ -အိမ်ရာ၊ မြေယာ ရောင်းဝယ်ခြင်း) အပေါ် ခြွင်းချက်ပြု၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှည်ကြာစွာပေးထားခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသကဲ့သို့ အခွန်တိမ်းရှောင်မှု၊ မသမာမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ပိုမိုကြီးထွားလာစေနိုင်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ အကြံပြုချက်စာတမ်းတွင် အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည်။
ငွေကြေးအရင်းအနှီး မြောက်မြားစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း မဟုတ်သည့် ၀ယ်လှောင်ရောင်းပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြေ၊ အိမ်၊ ယာဉ်ရောင်းဝယ်မှုများ အပေါ်တွင်လည်း သင့်တော်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် စနစ်တကျစည်းကြပ်သွားရန် လိုအပ်သည် ဟု တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ငွေလဲကောင်တာနှုန်း၊ ပြင်ပဈေးနှုန်း၊ FEC ဈေးနှုန်း၊ Earning နှုန်းများ ကွာခြားမှုရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း တစ်မျိုးတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပြီး ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း အတက်အကျ ကွာခြားချက် နည်းနိုင်သမျှနည်း၍ တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကာ ဈေးကွက်စနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်ဟု သိရသည်။
အခွန်ထမ်းက အခွန်ရှောင်ခြင်း၊ အခွန်ဝန်ထမ်းများက နိုင်ငံထက် ယင်းတို့၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေခြင်းများကို လျော့နည်းပပျောက်စေမည့် အခွန် မူဝါဒမျိုးချမှတ် ကျင့်သုံးသင့်ကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု အဆင့်ဆင့်အပေါ်တွင် အခွန်အကြိမ်ကြိမ် စည်းကြပ်ကောက်ခံ ခြင်းများကြောင့် ရရှိသည့်အခွန်သည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ ကုမ္ပဏီ ကြီးများက ကျခံရခြင်းမဟုတ်ဘဲ သွယ်ဝိုက်သော နည်းအားဖြင့် စားသုံး၊ သုံးစွဲသူများကသာ ကျခံရသည်ကို သတိပြုသင့်ကြောင်း အကြံပြုထား . . .
ယခုအခါ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၁၁ ခု အား နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်၍ အက်ဖ်အီးစီ ဆက်လက်ထားရှိသုံးစွဲရန် သင့်မသင့်၊ Stock Exchange စနစ် ဖြစ်ပေါ်လာပါက Stock Share ဈေးကွက် လုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟိုဘဏ်တွင် စုဆောင်းထားရှိသည့် နိုင်ငံပိုင် နိုင်ငံခြားငွေပမာဏ၊ ရွှေပမာဏနှင့် ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ဝေထားသည့် FEC ပမာဏ အခြေအနေများကို အများပြည်သူသိရှိအောင် အချိန်အခါ သတ်မှတ်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးသွားသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြထားသည်။
အခွန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အမြတ်ခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သော လုပ်ငန်း ၁၀ ခုတွင် အကြီးဆုံးလုပ် ငန်းရှင်များ မပါဝင်ခြင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ စုဆောင်းရရှိမှု မရှိခြင်း၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက ဥပဒေနှင့်အညီ ပေးဆောင်မှု မရှိခြင်း၊ အခွန်ရရှိအောင် တာဝန်ယူရသည့်ဌာနများ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ၏ဂျီဒီပီနှင့် အခွန်ရရှိမှုမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ လာအို ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီယက်နမ် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေချိန်တွင် ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပြီး ရသင့်သည့်အခွန် မရရှိသည်နှင့် အမျှ ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြပြီး တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများတွင် တိုးတက်မှု နှေးကွေးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အခွန်ထမ်းက အခွန်ရှောင်ခြင်း၊ အခွန်ဝန်ထမ်းများက နိုင်ငံထက် ယင်းတို့၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက် နေခြင်းများကို လျော့နည်းပပျောက်စေမည့် အခွန်မူဝါဒမျိုး ချမှတ်ကျင့်သုံး သင့်ကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် ဆင့်၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု အဆင့်ဆင့်အပေါ်တွင် အခွန်အကြိမ်ကြိမ် စည်းကြပ် ကောက်ခံခြင်းများကြောင့် ရရှိသည့်အခွန်သည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက ကျခံရခြင်းမဟုတ်ဘဲ သွယ်ဝိုက်သော နည်းအားဖြင့် စားသုံး၊ သုံးစွဲသူများကသာ ကျခံရသည်ကို သတိပြုသင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
အခွန်မှန်ကန်စွာ ရရှိရေးအတွက် အခွန်အကောက် ကောက်ခံခြင်း ခံရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်(အခွန်ထမ်း)၊ လုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်းအားအမျိုးအစားနှင့် အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း ခံရမည့်အရာများ မှန်ကန်သည့်တန်ဖိုး၊ ဈေးနှုန်း၊ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်သူများ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းတို့ ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်း ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တိကျစွာ သတ်မှတ်ပေးခြင်းများအပြင် ပြည်သူများ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်သည့် အခွန်မူဝါဒ၊ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် အခွန်စနစ်များပါရှိသည့် ဥပဒေများ ကို ခေတ်ကာလနှင့်အညီ ပြန်လည်ရေးဆွဲသွားသင့်ကြောင်း အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည်။
ငွေရေးကြေးရေးမူဝါဒနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများ ဟန်ချက်ညီစွာ အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုရေးအတွက် လက်ရှိတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မြင့်မားနေသည့်အတွက် ယင်းကို ထိန်း သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်များ လျှော့ချခြင်း၊ အခွန်အကောက်များ ပိုမိုရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပမာဏ ကို လျော့ကျအောင် လုပ်ဆောင်သင့် ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာအောင် စွမ်းဆောင်သင့်ကြောင်း တင်ပြထားသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ မှ ဘဏ်များ သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံ တကာ မှ အီလက်ထရောနစ်
ငွေကြေး လွှဲပြောင်း မှု နှင့်ဝယ်ယူ သုံးစွဲ မှု ပြု နိုင်သည့် ခရက်ဒစ် ကဒ် စနစ် ကို မျှော်
လင့် နေကြ သည် ။
ကမ္ဘော ဇ ဘဏ်က ၂၀၁၃ ခုနှစ် တွင် ၎င်းတို့ဘဏ် နှင့် အမေရိကန် မှ ခရက် ဒစ်
နှင့် ငွေကြိုတင် သွင်း ၀ယ်ယူသည့် ဒက်ဘစ် ကဒ် ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ နှင့် ပူးပေါင်း
ပြီး ကမ္ဘော ဇ ဘဏ်ကဒ်များ ကို ဗီဇာ ကဒ် ဖြင့် ထုတ် ဝေ တော့မည် ဟု ဘဏ်၏ ဒု
တိယ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဝေ က ပြောသည်။
ကျွန်တော် တို့ညှို နှိုင်းနေတဲ့အဆင့် ပါ ၊ မကြာခင် ကမ္ဘောဇ ဘဏ်ကဒ် တွေ ကို VISA
ကဒ် နဲ့သုံးမှာ ပါ ဟု ဆိုသည်။
VISA ကဒ် ဖြင့် ငွေ ချေ နိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု သည် မြန်မာ နှင့် အိမ်နီးချင်း ထိုင်း နိုင်
ဉ် ပင် ရရှိ သည်။
VISA ကဒ် အသုံး ပြု နိုင်ခဲ့ လျှင် နိုင်ငံခြား သား ကမ္ဘာ လည့် ခရီးသည် များ မြန်မာ နိုင်ငံ
သို့ဝင်ရောက်သည့် အခါ လမ်းခရီတစ်ထောက်ဉ် သုံး မည့် ငွေ ကြေး အတွက် ငွေ သား
စက္ကူ ကို ကြို တင် ထုတ်ထား စရာ မလို တော့ ချေ။
အခြား ဘဏ် ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က မူ သူ့တွင် တရားဝင် သတင်း ထုတ် ပြန်ရန် အခွင့်
မရှိ သော် လည်း Master Card, China Union Paid နှင့် ဂျပန်မှာ ဘဏ် ငွေကြေး
အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် လည်း တိုင် ပင် နေသည် ဟု ဆိုသည်။
VISA ကဒ်ကဲ့ သို့ပင် Master, Diner နှင့် Discovery တို့ မှာ ခရက်ဒစ် ကဒ်
နှင့် ငွေကြေး လွှဲပြောင်း ၀န်ဆောင်မှု နှင့် ပေးချေ မှုဆောင် ရွက် နေသည့် ကုမ္ပ
by FNG on July 28, 2012
HKT၊ ၊အမေရိကန် တွင် နေထိုင်သည့် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ၀ါကာ
အူဒင် နှင့် အခြား နှစ်ဦး ကို မြန်မာ အစိုးရ က လိမ်ညာ ၀ါဒဖြန့် မှု ၊ သတင်း
မှား ဖြန့်ချိမှု၊ လူမျိုးရေး အဓိရုဏ်းဖြစ်စေသည့် ပြော ဆိုမှု များ ဖြင့် ၀ါရှင်တန်
ဒီစီ ရှိ ရှေ့ နေ အချို့နှင့် တိုင်ပင် ကာ တရားရုံး တစ်ခု တွင် တရား စွဲ ဆို သွား
မည် ဟု FNG မှ သံတမန် သတင်း ရပ်ကွက်ကို ကိုးကား ပြီး စုံ စမ်း သိရှိရသည်။
နေပြည်တော် မြို့နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ အမည် မဖော် လို သည့် မြောက်အမေရိက
ရေးရာ ဌာန အကြီးတန်း အရာ ရှိ တစ်ဦး က ” ပြီးခဲ့ တဲ့ လတွေ က ရခိုင် ပြည်နယ် အရေး
မှာ ဖြစ်ခဲ့ တာ တွေ ကို သူက မီဒီယာ တွေ ကို လိမ်ညာ ပြီး ပြောတယ် လေ ၊ သတင်း
မှာ တွေ သာမက ဓာတ်ပုံ တွေ ကို လည်း မရိုးမသား ထုတ် ပြန်တယ် ” ဟု FNG
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင်သည် မြောက် အမေရိက တိုက် ရိုဟင်ဂျာ အစည်း
အရုံး ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ် ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ခိုးဝင် နေ ထိုင်သည့် ဘင်္ဂလား
ဒေရှ် ရိုဟင်ဂျာများ အရေး တွင် တက် ကြွစွာ ပါဝင် လှုပ်ရှား သည်။
နေပြည်တော် ကာ ကွယ် ရေး ၀န်ကြီးဌာန အကြီးတန်း အရာ ရှိ တစ်ဦး မှ လာသည့် သတင်း
တစ်ရပ် တွင် မူ ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင် ကို အကြမ်းဖက် သမား အဖြစ် သော် လည်း ကောင်း
အကြမ်းဖက်မှု များ ကို ထောက်ခံ အားပေး သူ အဖြစ် သော် လည်း ကောင်း
ကြေငြာ သွား ရန်အစီအစဉ် ရှိ သည် ဟု FNG မှ သိရသည်။
စက်တင်ဘာလ တွင် စတင် မည့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
၏ အမေရိကန် ခရီးစဉ် ဉ် ရိုဟင်ဂျာ အချို့သည် ဆန္ဒပြ ရန် စီစဉ် ထား ကြောင်း ၊ ထိုဆန္ဒ
ပြ မှု များ ကို နောက် ကွယ် မှာ ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင် က အားပေး အား မြှောက် ပြုထား
ကြောင်း မေရီလန်း ပြည်နယ် မှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဆူလေမန် ဖိုင်ဆယ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံး တိုင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ပြီး သေလိုက်ကြဖို့ကောင်းပြီ ..။
ဒေါ်ခင်ကြည် ရံပုံငွေ ကာတွန်းပြပွဲတွင် ဆင်ဆာထိခဲ့သော ကား...
ရခိုင်မှာ လ၀က/နစက သက်ဆိုင်ရာများ လာဘ်စားတာကို ဖော်ထုတ်ချင်နေတဲ့ ရခိုင်သားများ၊ မြန်မာလူငယ်များ ....၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် လ၀ကမှ တရားဝင် ထုတ်ပေးခဲ့သော white card လေးသိန်းကျော်ကို လက်မခံချင်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ..။
ယခင်အစိုးရလက်ထက် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ အရ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာခဲ့သော ဘင်္ဂလီလွှတ်တ်ာအမတ်များကို မောင်းထုတ်ချင်သူများ..။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် လယ်သိမ်းခံလယ်သမားများနဲ့ ..လယ်သိမ်းခံ လယ်သမားအခွင့်အရေး တောင်းဆိုသူများ...လွှတ်တော်အမတ်များ။
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် အခွန်ရှောင်ထားသော နိုင်ငံတော်သူဌေးများနှင့် စစ်တပ်နောက်ခံ လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ချင်သော၊ မီဒီယာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ...၊ လွှတ်တော်အမတ်များ။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် အစိုးရဌာနများ၏ လာဘ်စားမှုများ .. ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ ငွေစာရင်းကွာဟမှုများကို ဖော်ထုတ်ချင်သော ဂျာနယ်များ...လွှတ်တော်အမတ်များ...။
အားလုံး ... သေလိုက်ကြဖို့ သင့်ပြီ...။
၂၀၀၈ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅
အမေစု ဘာ့ကြောင့် လွှတ်တော်ထဲကို အရင် မ၀င်ချင်သလဲ.......။ အခြေခံ ဥပဒေကို ဘာ့ကြောင့် အရင်. ပြင်ချင်ခဲ့သလဲ.....ဘာ့ကြောင့် ကျမ်းမကျိန်ချင်သလဲ.... ...... ခုတော့ .... သိကြပြီလား....။
အကုန် ... သေလိုက်ကြတော့.. ဘာမှ လုပ်မနေကြနဲ့တော...။
ခင်ဗျားတို့ မသေချင်ရင်..... အဲဒါကြီးကို အရင်ပြင်ဖို့ကြိုစားကြတော့..။
ဒါကြီးက .. ခင်ဗျားတို့ကို ... ကိုယ်စားမပြုထားဘူး..။
တိုင်းရင်းသားအားလုံး သဘောပေါက် ...။
Yan Aung- facebook
ဒီပို့ နဲ့ ပါတ်သက် ပြီး ကို ရန်အောင် နှင့် အခြေအတင် ဆွေးနွေး မှုများ
Thway Thit Sar ဘာဆိုင်လို့လဲ ကို Yan Aung ရ...
ရခိုင်မှာ လ၀က/နစက သက်ဆိုင်ရာများ လာဘ်စားတာကို ဖော်ထုတ် ချင်တာနဲ့)
၂၀၀၈ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ နဲ့က ဘယ်လိုများ ပတ်သက်နေလို့လဲ လ၀က/နစက တွေ လဘ်စားလို့ သေချာပါတယ်ဆိုရင် တရားစွဲခွင့်မရှိဘူးပေါ့... အဲဒီလို လဘ်စားဖို့ကို အစိုးရက မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ တာဝန် တစ်ခုအနေနဲ့ ခွင့်ပြုထားတာပေါ့.. အဲလိုလား အဲဒီ ဥပဒေကို ကို Yan Aung နားလည်လို့လား ရှင်းပြပါဦး...
ဘာမှ မဆိုင်ပဲ ဒေါ်ဆုကြည် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချင်တာကို နှပ်ကြောင်းပေး ကာဗာ လုပ်ပြီး စုဂုဏ်တင်သွားတာလို့ပဲ မြင်တယ်....
ဒေါ်ဆုကြည် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချင်တာနဲ့ တခြားစီပါ... ဒေါ်ဆုကြည်သာ သမ္မတ တက်လုပ်ခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင် သူလည်း အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ဒီလောက် စိုင်းပြင်းပြီး မြန်မြန်လုပ်ချင်နေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး...
Yan Aung အဲဒါဆို ကိုသွေး ခင်ဗျားကို ယောက်ျား ပီပီ ကျွန်တော်မေးမယ်..။ ခင်ဗျား ဒီ ဒုဝန်ကြီး စကားကို ထောက်ခံလား..။
ထောက်ခံတယ် .. မထောက်ခံဘူး...။ တစ်ခွန်းတည်းဖြေနော်...။ ယောက်ျားပဲ...။
Htet Lin Thway Thit Sar>ယင်းအဖွဲ့
အကြောင်းပြုလျက် ယင်းတို့အား တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်းမရှိစေရ။................နားလည်အောင်လို့ရေထားတာပါ.....
Thway Thit Sar အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော် မေးထားတာ ဖြေကြည့်...
၁၊ လ၀က/နစက တွေ လဘ်စားလို့ သေချာပါတယ်ဆိုရင် တရားစွဲခွင့်မရှိဘူးပေါ့... အဲဒီလို လဘ်စားဖို့ကို အစိုးရက မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ တာဝန် တစ်ခုအနေနဲ့ ခွင့်ပြုထားတာပေါ့.. အဲလိုလား??
၂၊ ကြံ့ဖွံ့က ဘင်္ဂလီလွှတ်တ်ာအမတ် တွေက ယခင် အစိုးရ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက် လို့ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါသလဲ.. မောင်းထုတ်လို့ မရဘူးလို့ကော ပြောနိုင်ပါသလား??
၃၊ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ ငွေစာရင်းကွာဟမှု တွေက အရင်အစိုးရ မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်တွေလား အဲဒီလို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး စာရင်းလိမ်တဲ့ သူတွေ ရှိရင် အရေးယူလို့ မရဘူးပေါ့??
အဲဒါလေးတွေပဲ ဖြေကြည့်ပေးပါ ကို Htet Lin... ကို Yan Aung...
Kyaw Myolinn ကို ရန်အောင်ပြောတာက လဝက တခုတည်း ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။
Yan Aung ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေ..။ မူဝါဒ ဆိုတဲ့ ဘောင်ထဲမှာ .. ခင်ဗျား တို့တက်ခဲ့တဲ့ DSA ကနေ တိုက်စည်း အဲဒီကနေ .. နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်အထိ အဆင့်မှာတောင် အားလုံးက စင်းလုံးချော အရည်အချင်းပြည်ပမီလို့ အောင်တဲ့သူတွေချည်းပဲလား..။ လိုက်လို့အောင်တဲ့လူ မရှိတော့ဘူးလား..။ ခင်ဗျားအသိဆုံး ....။
ဒါပေမယ့် အားလုံးက စာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာ တ၇ားဝင် မဖြစ်သွားကြဘူးလား..။ လမ်းညွှန်ချက်အောက် ဥပဒေအောက် ရောက်မသွားကြဘူးလား.. ခင်ဗျား ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေပါနဲ့..။ ဗိုလ်သင်တန်း ဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမှာ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း ဖြေဖူးတာမဟုတ်ဘူး.။ ...
အဲဒီလောက်ပြောရင် ခင်ဗျား သဘောပေါက်မှာပါ..။ ဘာမှ ကာကွယ်နေစရာမလိုဘူး..။ အများ မိုးခါးရေသောက်ခဲ့ရတဲ့ခေတ်ကို ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း ထီးမိုးပြီး ချိုတယ်လို့ပြောနေတာ ရယ်စရာပဲဗျ..။
Htet Lin ခက်တောခက်နေပြီ.....၂၀၀၈ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ ကိုဆွဲတာဘယ်သူတွေလဲ...ထောက်ခံတာရောဘယ်သူတွေလဲ......သေချာစဉ်းစားပြီးမှ မေခွန်းတွေမေးပါ.........
Yan Aung နောက်တစ်ချက်က ခင်ဗျား ဒီစာကိုလည်း ခင်ဗျား ဖတ်ဦး..။
အစိုးရဟောင်း လက်ထက်က လယ်မြေကို ဘယ်သူတွေ စတင်ဝင်ရောက် နေ၇ာယူခဲ့တယ်ဆိုတာ...။
ခင်ဗျားက ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ခင်ဗျား ဆ၇ာတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတာလား..။
နာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီများအပြင် လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဆင့် တာဝန်ရှိသူအချို့၊ လွှတ်တော်အမတ်အချို့ နှင့် ပတ်သက်ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများပါ ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိသည် ဟု သိရသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နှင့် ဒဂုံအရှေ့မြို့နယ် အတွင်း၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် တောင်သူများအကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် အတွက် ဟူသော စီမံချက်ဖြင့် ကုမ္ပဏီကြီးများက တောင်သူများနှင့်စတင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ကိုင်လာသည့်နှစ် ကြာလာသည်အမျှ လယ်ယာများမှာ ကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်ကုန်ကြောင်း၊ တောင်သူများ လက်လွှတ်ခဲ့ရကြောင်း၊ တောင်သူများ၏ ဆန္ဒအရမဟုတ်ဘဲ မလွန်ဆန်နိုင်၍ လက်လွှတ်ရခြင်းမျိုး များပြားကြောင်း၊ ထို့အတွက် ယခုအခါ ဆန္ဒပြမှုများ၊ တန်ရာတန်ကြေးပြန်လည် တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Thway Thit Sar ကျွန်တော် မေးထား တာကိုပဲ ဖြေကြည့်ပေးပါ လယ်ယာဥပဒေကို ကျွန်တော် မမေးပါဘူး ခင်ဗျား ပြောထားတဲ့ အထဲကပဲ ကျွန်တော် မေးထားတာ ကို Yan Aung လယ်ယာဥပဒေ အတွက် ဆိုရင် အခက်အခဲ အရှုပ်အထွေး တွေ အများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာ သိပါတယ်... အဲဒီ လယ်ယာကိစ္စတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရပါဘူး... အရင် အစိုးရ လက်ထပ်က လွန်တာတွေလဲ ရှိပါလိမ့်မယ်.. ဒါနဲ့ ကျန်တာတွေနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲဗျ.... သိချင်လို့ပါ...
Htet Lin အဖြေလဲရှိတယ်...သိလဲ သိနေတာကိုလာမေးနေသလိုဖြစ်နေတယ်....
Minmin Hlaing ဝန်ထမ်းလာတ်စားဒါတိုင်တိုင်းရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းရာထူးတိုးသွားတယ်။ကိုယ်တွေ့ကိုပြောပြတာ
Yan Aung ခင်ဗျားကိုပြောမယ်လေ... ခင်ျေားက အရိပ်ပြတောင် အကောင်မမြင်ဘူး ..။ မူဝါဒ ဆိုတာ ငွေပေးရင်အတည်ဖြစ်တယ်လေဗျာ..။ ခင်ဗျား ဟိုလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ စာရွက် မြင်ဖူးနေတာပဲ..။ လူမျိုးမှာ ဘာရေးထားလဲ..။
ခင်ဗျား အပြင်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ဖူးရင် မူဝါဒတို့ ဥပဒေတို့ထဲကို ၀င်အောင် ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား သိလိမ့်မယ်..။ စာအုပ်ထဲက အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ငွေပဲလိုတယ်ဗျ..။ ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာ.. လိုင်စင်တောင် ဆယ့်ရှစ်နှစ်မပြည့်သူ ရခဲ့ဖူးတဲ့ ခေတ်လေဗျာ..။ ကျွန်တော် မှတ်ပုံတင်ပျောက်တာလုပ်တာတောင် နှစ်သောင်းပေးရတယ်.. လက်မှတ်တောင် သူများထိုးပြီးသား လက်ဗွေ သူများ နှိပ်ပြီးသား သွားယူယုံပဲ..။
ကားလိုင်စင်လုပ်တာ ပွဲစားက သူ့လက်မှတ်ထိုးပြီး သူ့ဘာသာသူ လုပ်လာတာ.. သွားယူရုံပဲ..။
အဲဒါတွေက မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့် တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ထဲမှာ အကြုံးဝင်သွားပြီလေ...။
မှတ်ပုံတစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့က အဲဒီလောက်မခက်ပါဘူး..။ ငွေပေးရင် အစိမ်းကတ်ကော အဖြူကတ်ကော ရတယ်.။ အဓိက က မူဝါဒတွေ၊ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ဥပဒေဘောင်ထဲကို ၀င်တယ်ဆိုတာ အဲဒါတွေကိုပြောတာ..။ ခင်ဗျား ဒါကိုမှမသိ၇င်. အပြင်ထွက် လုပ်စားကြည့်...သိလိမ့်မယ်..
သတ္တုတွင်းနဲ့ the voice ဂျာနယ်ကို ဥပမာကြည့်လေ .. စာရင်းစစ်ချုပ်က လွှတ်တော်မှာ ပထမဆုံးတင်တဲ့ငွေကြေးကွာဟမှုကို the voice က ဖော်ပြတော့ ဘာဖြစ်လို့ တရားစွဲပြိး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက ဘာဖြစ်လို့ ၀န်ကြီးဌာနတွေရဲ့ ငွေစာရင်း ကို လွှတ်တော်မှာ မတင်တော့သလဲ..။
ခင်ဗျားကိုတစ်ခုပြောချင်တာက အဲဒီ အခြေခံဥပဒေအမှတ်အောက်က အ၇င်အစိုးရက လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်က တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား ဒီဥပဒေကို ကာကွယ်ရတာ... တန်တယ်ဗျ..။ ဒါပေမယ့် အခု .. မတန်ဘူး..။ အပြင်လောက ကိုမသိတဲ့ ကလေးလိုပဲ .. ရှင်းပြရတာ.. မောတယ်ဗျ..။
Yan Aung အဲဒီပုံထဲက မြန်မာလူမျိုးဆိုတာက ဘာသဘောလဲဗျ..။ နေ့တိုင်း ဒီစာရွက်ကို စိစစ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လျှောက်တုန်းက ထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ ကော်မရှင် က တာဝန်ရှိသူတွေ ဘာ့ကြောင့် မိဘနာမည်နဲ့ လူမျီုးအမည်ရဲ့ ထူးခြားမှုကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရသလဲဗျ..။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် ပိုက်ဆံရှိ သူဌေးမို့လို့လား..။
ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေကို အဲဒီလိုနည်းနဲ့ ကျော်ချလို့ ရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားကို သိစေချင်တယ် ကို သွေးသစ္စာ...။ မူ ဆိုတာ လူကိုခင်ရင် ဟ .. ပေးပါတယ်..။
Mg Mike Mike ယခင်လူများကို တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိသော်ငြား ယခုလက်ရှိ လူများအား ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ တရားဥပဒေ လမ်းကြောင်းမှ ရင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်၊ တရားနည်းလမ်းအရ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့် ရှိနေဆဲပင်။
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ရှိနေသည့် အမတ်လောင်း ၂ ဦးအားလည်း ပြန်လည် ရပ်ဆဲပိုင်ခွင့် ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ရပ်ဆဲသည့်အတွက် အမတ်လောင်း ၂ ဦးမှ မကျေနပ်ပါက မည်သူမျှ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် မရှိပါချေ။ အဘယ့်ကြောင့်မူ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကြောင့်ပင်တည်း။
Amt Dragon Amt အ၇င်စစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့ သမျှကိုပြန်မဖော်ထုတ်စေ
Kaung Kim Nee သိတာကြာပြီ... ကိုရန်အောင်ရေ...
ဒါကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာပဲ...
တရုတ် နဲ့အိန္ဒိယရဲ့ နယ်ခြားမျဉ်ဲးဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့...
ကဲဟိန္နူလုပ်ကျမလား... မဟာယန အနွယ်ထဲဝင်ကျမလားစဉ်းစားကျပေါ့
Zinmar Myint ဘယ်သူ့ ဖက်မှလိုက်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်အယုတ်တမာများကိုကာကွယ်ပေးထားသောဥပဒေရေးဆွဲထားတာကိုအခုမှ သိလို့ အလန့် တကြားထ အော်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ဒီဖွဲ့ စည်းပုံကိုလက်မခံနိုင်ပေမယ့်လဲအခုအချိန်၊ အခုအခြေအနေနဲ့ လုပ်လို့ ရသလောက်ချက်ချင်းစလုပ်မှကိုဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးပြီးသန့် ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်ရှိသူတွေလဲရှိကြပါလိမ့်မယ်၊သူတို့ ကဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုသိရက်နဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးကြတာပါ။မသိလို့ မဟုတ်ပါ၊၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ လိုအိုက်တင်ခံနေခဲ့ကြရင်ဒီထက်အသက်တွေကြီးပြီး....ကြီးပြီး.....ကြီးပြီး.....?????
သက်ဝင်းအောင်ရဲ့ အရိုးအုတ်ဂူကို နောင်တော်များ သွားရောက် အလေးပြု
ဓာတ်ပုံ- အံ့ဘွယ်ကျော် (၈၈)
မန္တလေးကို ရောက်နေကြတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုပြုံးချို၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် အစရှိတဲ့သူတွေဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ မန္တလေးထောင်အတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ညီလေး သက်ဝင်းအောင်ရဲ့ အရိုးအိုး အုတ်ဂူကို ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့၊ နေ့လယ်က သွားရောက် အလေးပြု ခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
ကိုသက်ဝင်းအောင်ဟာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးလည်းဖြစ်ပြီး ကိုပြုံးချိုရဲ့ ညီအရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ ကိုသက်ဝင်းအောင် သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြစ်ပေး အရေးယူမှု တစုံတရာ မရှိသေး ပါဘူး။
စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသည်များအတွက် ရွှေတိဂုံမှာ သတင်းကောင်းတခု ရှိပါတယ်။ WiFi လို့ ခေါ်တဲ့ ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဟာ မကြာခင်မှာ ရွှေတိဂုံကို ရောက်လာတော့မယ် တဲ့။
ရင်ပြင်ပေါ်မှာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်၊ အင်တာနက်ထဲဝင်ပြီး Facebook မှာတင်၊ ဟန်ကျပြီပေါ့။
အင်တာနက်မြန်နှုန်းအသင့်အတင့် ရှိရင်တော့ ဟန်ကျပြီပေါ့။
Router (အထိုင်စက်) နဲ့ နီးရင် အင်တာနက်မြန်နှုန်း ပိုမြန်ပါမယ်။
အထိုင်စက် ဘယ်နားထားမလဲ ရေးမထားပါ။
(နိုင်ငံခြားခရီးသည်တဦး ရွှေတိဂုံ ၀င်ကြေး ၅ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ၀င်ကြေးပေးဆောင်တဲ့နေရာမှာ ဝိုင်ဖိုင်သုံးဖို့ Password ပေးဖွယ် ရှိပါတယ်)
စနေနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းရဲ့ သတင်းက ဒီလိုပါ -
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ လာရောက် ကြည်ညိုကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများ အသုံးပြုရန် ဝိုင်ယာလက်/ဝိုင်ဖိုင်ကို တပ်ဆင်ရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်၍ သြဂုတ်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း စတင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးတာဝန်ရှိသူထံမှ သိရှိရသည်။
ယင်းစက်ကို ခရစ်စတယ်လ်ရှိုင်းကုမ္ပဏီက ရွှေတိဂုံစေတီတော် ဂေါပက ရုံးသို့ လှူဒါန်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများသည် တစ်ဦးလျှင်အများဆုံး မိနစ် ၃ဝ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ဝိုင်ဖိုင်ကို စေတီတော်ရင်ပြင်တွင် သင့်တော်ရာနေရာ၌ တပ်ဆင်ထားမည်ဖြစ်ကာ စေတီတော်ပေါ်၌ မည်သည့်နေရာမှမဆို အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ဝိုင်ဖိုင်ကို Password ပေးထားမည်ဖြစ်၍ အသုံးပြုလိုသူ အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုခွင့်ကတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စေတီတော်စတင်ဖွင့်ချိန်မှ ပိတ်ချိန်အထိ အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားမည်ဖြစ်ကာ လောလောဆယ် စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် စက်တစ်ခုသာ တပ်ဆင်ထားသော်လည်း နောင်တွင် စေတီတော်မုခ်အားလုံး၌ တပ်ဆင်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ရုံး တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရှိရသည်။
ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးအနေဖြင့်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းကို နိုင်ငံခြားသားများသိရှိစေရန် နီးစပ်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် တင်ထားပေးမည် ဖြစ်ပြီး ရင်ပြင်ပေါ်တွင်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်များလည်းထောင်ကာ ကြေညာထားမည်ဖြစ်သည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ ၂၄ ရက်အထိ ဧည့်ဝင်ဦးရေ ၁၄,၃၈၃ ဦး ရှိပြီး ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ်နှင့်မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှ အများဆုံးလာရောက်ကြည်ညိုကြကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
"လက်ရှိအကြပ်အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မွတ်စလင်အစွန်းရောက်များ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုမှန်သမျှကို ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချသည်" လို့ မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံးရဲ့ သောကြာနေ့ရက်စွဲတပ် ကြေညာချက်တစောင်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ် ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့မှာ ရှိနေသူ သုံးဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
အပြည့်အစုံကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွါးနေခဲ့သော အထိကရုဏ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်း
၃။ ထို့နောက် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုများနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများအပြင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဆင့်ဆင့်၏ မမျှ မတ ဘက်လိုက် ကျင့်သုံးသည့် သတင်းများလည်း ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၇။ အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အထိကရုဏ်းများတွင် သေကြေ ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသော နှစ်ဖက်သော ပြည်သူများအတွက် အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါသည်။
ထိုအရေးအခင်းကြောင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးလိုလားသော လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး၊ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ကျန်ရှိသေးသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လယ်သမားအခွင့်အရေးစသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် တင်းမာသူများအလိုကျ မှေးမှိန်အားပျော့လာသည်ကိုလည်း စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့် တွေ့မြင်နေရသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာမွတ်စလင်အစည်းအရုံး၏ သဘောထားကို ယခုကဲ့သို့ ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
(က) ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားပြသနာများကို (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟူသော ဝေါဟာရအား အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။)
အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကိုလည်း မထိခိုက်စေ၊ နိုင်ငံတကာစံများနှင့်လည်း ညီစေသော ကွန်ဖရင့်ကြီးတစ်ခုဖြင့် အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များရယူရန်။
ကိုကျော်စွာ +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org;
ကျမတို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိဘူး .. ရှင်တို့မှာခေါင်းမရှိဘူး
ဒီကဗျာလေးကိုလည်း ရွက်သစ်ကလောင်နာမည်နဲ့ ၂၀၁၀ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ ဆန္ဒပြပွဲတွေစလာတဲ့အချိန်တုန်းက အဲ ဒီနေရာအထိသွားပြီး သူတို့မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ပြန်ရောက်တော့ရေး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှ လှိုင်သာယာ ဆန္ဒပြပွဲတွေဆိုတာ လူတိုင်းသိလာတာပါ။ ဒီကဗျာကို သူငယ်ချင်းတယောက် ပြည်ပက ၀ဘ်ဆိုဒ်တခုကို ကျနော်မသိခင် လှမ်းပို့လိုက်ပြီး ပြည်ပမှာအခြေချနေတဲ့ ကဗျာဆရာမ (နိုင်ငံရေးကဗျာတွေ)တယောက်ကနည်းနည်းကို များများလှုံ့ဆော် ရေးတဲ့ ကဗျာဆိုပြီး ကဗျာအောက်မှာကွန်မန့်ပေးသွားခဲ့တာလေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ သိမ်းထားခဲ့တာပါ။ ခုမှ ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ အမှန်တရားတွေဟုတ် မဟုတ် အခု ကဗျာဖတ်သူဆီက သက်သေပြုပေးဖို့ အကူ အညီတောင်းပါရစေ….။
“ကျမတို့မှာခေါင်းဆောင်မရှိဘူး .. ရှင်တို့မှာခေါင်းမရှိဘူး”
ငါပဲ၊ ကျုပ်ပဲ..၊ ဒီမှာပဲ .. ဆိုပြီး
ကြက်သီးတွေ ဖြန်းဖြန်းဝေ အားကျခဲ့ဖူးတယ်….။
အခု အရှင်လတ်လတ်ကြီး မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ
သူတို့ ရင်ထဲမှာ ဒုက္ခသစ္စာဒိုင်းနဲ့
ခေါင်းမရှိတဲ့ လူတွေကိုအော်ပြောလိုက်တဲ့ အသံ
အော်လှိုင်သာယာ .. လှိုင်သာယာ
ဘာမှ မလှိုင်ခဲ့၊ မသာခဲ့ မယာခဲ့တဲ့နေရာ
တနေ့ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ကနေ
တလ ၂၅၀၀၀ – ၃၀၀၀၀ တွေ စုဝေးရာ
ကမ္ဘာမှာ ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်နေပါတယ်လို့ အူတတ်တဲ့
သူတို့နဲ့ ကျမတို့အကြား ရန်၊ ငါစည်းများခြားထားသလိုလို။
ကျမတို့များ လက်နက်ဆွဲကိုင် နိုင်လှန်နိုင်သလိုလို။
ကျမတို့များ ဒေါင်းအလံလွှင့်လို့ သူတို့ကို တော်လှန်သတ်ဖြတ်တော့မလိုလို။
ကျမတို့များ သူတို့ကိုအကြောဆွဲစေတတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ တောင်းနေသလိုလို။
ခေါင်းမရှိတဲ့ ရှင်တို့လိုလူတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ
တခါမှ အမှန်တရားနဲ့ မကင်းကွာခဲ့ပါဘူးရှင့်။
ဆူညံမြည်ဟီးနေကြတယ်ပါတယ် ရှင်….။ ။
by Sein Khat Soe on Saturday, July 28, 2012 at 2:10am
ဒုတိယသမ္မတလောင်းသစ် တဦးကို တပ်မတော် အစုအဖွဲ့မှ ထပ်မံ အဆိုပြု
ယမန်နေ့ သောကြာနေ့၌ ကျင်းပသော လွှတ်တော်သို့ တပ်မတော် အစုအဖွဲ့မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည်၊ ဒုတိယ သမ္မတ (၁) နေရာအတွက် နောက်ထပ် ဒုတိယ သမ္မတလောင်း သစ်တဦးကို ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့သို့ ထပ်မံ တင်ပြကြောင်း ဒုတိယ သမ္မတ ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သည့် လွှတ်တော် အမတ် တဦးက ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပထမ အဆိုပြုထားသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေသည်၊ ဒုတိယ သမ္မတနေရာမှ အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ် ပါသည်။ သူသည် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် နေရာ၌ပင် ဆက်လက် တည်ရှိခွင့်ရမလားဆိုသည်မှာ မသဲကွဲသေးဟု အဆိုပါ လွှတ်တော်အမတ်က ပြောပါသည်။
ဦးမြင့်ဆွေသည် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် (၂၄)ရက်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဘန်ကောက် အပြန်ခရီး၌ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ကြို ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဤကြိုဆိုမှုကြောင့် ဒုတိယ သမ္မတလောင်းနေရာ၌ သူဆက်လက် တည်မြဲနိုင်သေးသည်ဟု ထင်ကြေးများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း ယခု သတင်း ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ် အဆိုသစ် တင်ထားသူသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို မသိရသေးသော်လည်း ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ပြီးမှသာ ကြေညာ နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူက ဆိုပါသည်။
ဤအခြေအနေကြောင့် ဦးမြင့်ဆွေသည် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ရုံးသို့ မတက်ရောက်ခဲ့သည်မှာ သီးတင်းနှစ်ပတ်ခန့် ရှိနေ ပြီးဖြစ်သည်ဟု ၀န်းကြီးချုပ်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနကို ပြောပါသည်။
ဒုတိယ သမ္မတနေရာသည် ယခင်က ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နေရာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် အနားပေးလိုက်ရာ ကလွှတ်တော်ထဲက တပ်မတော် အစုအဖွဲ့သည် အသစ်ပြန်လည် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဦးမြင့်ဆွေသည် ဒုတိယသမ္မ တရာထူးအတွက် စည်းကမ်းချက်နှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့က ပယ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အစိုးရက KIA အပေါ် ကိုင်တွယ်မှုနှင့် ဆိုင်ဟု MPSI ကဆို
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးသည်၊ အစိုးရမှ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ၏ တောင်းဆိုချက်ကို မည်သို့ ကိုင်တွယ် မည်နည်း ဆိုသည့် အပေါ် တည်မှီနေကြောင်း Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) အဖွဲ့၏ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုဟ် Mr. Ashley South က ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ စံခလ ဘူရီမြို့၌ ကျင်းပသော ရှင်းလင်းပွဲ တရပ်တွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
“ ကချင်ပြသနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အဓိက (ကီး) ပြသနာဖြစ်တယ်။ ဒါကို အစိုးရ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ကတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒီတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရဲ့ အစဘဲ ရှိသေးတယ်။ နိုင်ငံတကာ မှာကတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်နိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းပြီးလို့ ယူဆနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရက သူတို့ရဲ့မီဒီယာပေါ်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရပြီးလို့ တွင်တွင်အော်နေတာပေါ့” ဟု ဆိုပါသည်။
Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) အဖွဲ့သည်၊ ပြီးခဲ့သည့် ဇန္နာဝါရီလက နော်ဝေးနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မြန်မာ နိုင်ငံကို အလည်အပတ် ရောက်ရှိပြီးနောက် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အကူအညီပေးရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဖွဲ့၌ Charles Petrie (ရန်ကုန်၌ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော UN အကြီးအကဲဟောင်း တဦးဖြစ်သူ၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခံရသူ) နှင့် Mr. Ashley South တို့အား အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်အပ်ထားပါ သည်။
၄င်းတို့သည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော အဖွဲ့များ၏ သဘော တူညီချက်အတိုင်း တိုင်းရင်းသား ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲပေါင်း အကြိမ် (၂၀၀) ကျော် ကျင်းပခဲ့ပြီး အမြင်ဖလှယ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ရရှိသော ရလာဒ်အပေါ် မူတည်ပြီး အကူအညီ ပေးသွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။
“ ကျနော်တို့က အစိုးရနဲ့ သဘောတူထားတဲ့ အတိုင်း ကာယကံရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးနေပါတယ်။ တကယ့်လိုချင်တာက အနီးကပ် ကူညီသွားတဲ့သဘောပါ” ဟု Ashley ကဆိုပါသည်။
ရှင်းလင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန)
နော်ဝေး အစိုးရသည် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒေါ်လာသန်း (၇၀) ကူညီသွားမည်ဟု UNFC ခေါ် စည်းလုံး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီနှင့် လာရောက် ဆွေးနွေးစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုပါသည်။
Ashley South သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစပြီး နှစ်ပေါင်း၂ဝ နီးပါး တိုင်းရင်းသားအရေး၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အတွေ့အကြုံများ ကိုမူ Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake နာမည်ဖြင့် စာအုပ်ရေးသား ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများကို ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခန့်ခွင့်ရှိလာ
သတ်မှတ်သော အရည်အချင်း ရှိပါက၊ ပြည်သူကလည်း ရွေးချယ် တင်မြှောက် မည်ဆိုလျှင် အမျိုးသမီး များကိုလည်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခန့်အပ်နိုင်ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့်က လွှတ်တော်ထဲ၌ ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။
ဤကိစ္စကိုဇူလိုင်၂၆ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ကျင်းပသွားသည့် ပြည်သူ့လွတ်တော် စတုတ္ထ ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၅) ရက် မြောက်နေ့၌ ဘားအံ မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ ဒေါ်နန်းစေအွာက တင်ပြ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ တင်ပြချက်ကို ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နေ့ အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
သတ်မှတ်သော အရည်အချင်းများမှာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ပြဌာန်း (၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု လွတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁) ၁၃ရ၃ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၃ ရက် (၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်) နေ့က အတည်ပြုထားသော အခန်း(၂) မှ ပုဒ်မ (၅)၏ အရည်အချင်း အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာရှေ့နေများကောင်စီ (Burma Lawyer’s Council) ဦးမြင့်သိဏ်းကလည်း “ အရင်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို လုပ်ခွင့်မပြုဘူး လုပ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပေမယ့် အခုတကြိမ် လွတ်တော်ထဲမှာ အမျိုးသမီးကို ဖိတ်ခေါ်တာမျိုး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုး လမ်းဖွင့်ပေးတာမျိုး စဉ်းစားပေးလာတဲ့ အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်” ဟုသူကဆိုသည်။
(က) နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊
(ခ) အသက် ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ) သင့်တင့်သော ပညာအရည်အချင်ရှိသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဃ) စားဝတ်နေရေးဖူလုံမှု ရှိသူဖြစ်ခြင်း၊
(င) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း တစ်ဆက်တည်း အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်နေထိုင်လျက် ရှိသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် အမှန်တကယ် နေထိုင်မည့်သူဖြစ်ခြင်း၊
ခြွင်းချက် ။ ဒေသခံ အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း နေထိုင်သည့် ကာလကိုလျှော့ပေါ့ စဉ်းစားနိုင်သည်။
(စ) ရပ်ရွာက ကြည်ညိုလေးစားပြီး သိက္ခာသမာဓိရှိသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဆ) ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး ပေးအပ်သည့် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဇ) နိုင်ငံတော်နှင့် ရပ်ကွက်ဒေသ၏ အကျိုးကို စေတနာ ထက်သန်စွာဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ခြင်း၊
(ဈ) အတူနေ မိသားစုဝင်များသည်လည်း အကျင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ခြင်း၊
(ည) တာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်ခြင်း၊
(ဋ) လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့စည်းဝင် မဟုတ်ခြင်း၊ မတရား အသင်းအဖွဲ့များ၌ ပါဝင်သူ၊ ဆက်သွယ်သူမဟုတ်ခြင်း။
အစိုးရ တပ်တွင်း စစ်ဆင်ရေး အမိန့် နာခံမှု လျှော့ရဲလာ
ကချင်ပြည် လွတ်မြောက် တပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆင်နေသော အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ထဲ၌ တချို့တပ်ဖွဲ့သည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ များကို အထက်သို့ လိမ်လည် တင်ပြနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦး လာနန်းက ပြောပါသည်။
“ဒီလို လိမ်ပြီး တင်ပြနေမှတော့ စစ်ဆင်ရေး အမိန့်ကို လွန်ဆန်နေတဲ့ သဘောဘဲပေါ့။ မူဆယ်ဖက်မှာ ဆိုရင် စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတွေ အပြင်းအထန် ဆင်နွဲနေတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေရှိသလို ဗဟိုစခန်းနားက ရှေ့တန်းတပ် တွေမှာတော့ တိုက်ပွဲ မရှိတဲ့ နေရာကိုလည်း တိုက်ပွဲရှိနေကြောင်း လိမ်ပြီး သတင်းပို့နေတာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အမြောက်ကြီးတွေ နဲနဲပါးပါးပစ်ပြီး၊ တိုက်ပွဲဖြစ် နေကြောင်း သတင်းပို့နေတာလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင်တော့ တပ်ဖွဲ့တချို့ဟာ သူတို့လည်းတော်တော် ဒုက္ခရောက် နေကြလို့ တိုက်ပွဲ ဆက်တိုက် လိုစိတ်တွေ သိပ်ရှိပုံ မပေါ်တော့ဘူးလေ”ဟု ဆိုပါသည်။
သို့သော်လည်း KIA ဗဟို စခန်းဝန်းကျင်၌ တပ်အင်အားများ ဖြည့်တင်းထားပြီး နေ့စဉ် ပစ်ခတ်မှုများ ရှိနေပါသည်။ KIA သည် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ထံ ကျဆုံးသွားသော ၄င်းတို့ စခန်းများ ပြန်လည် ရရှိရန် အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင်လည်း အလွယ်နည်းဖြင့် ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများလည်း ရှိခဲ့သည်ဟု KIA တပ်မှူးတချို့က ပြောပါသည်။
ဤအခြေအနေများကြောင့် ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ကစထမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးက ကချင်စစ်ဒေသ၌ စစ်ဆင်နေသော စစ်ဗျူဟာမှူးများကိုပါ ခေါ်ပြီး စစ်ဆင်ရေး အရှိန်မြှင့်ရန် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၌ အရေးပေါ်အစည်းအ ဝေး ခေါ်ပြီး ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု ဦးလာနန်းက ဆိုပါသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးသည် သြဂုတ်လ (၄) ရက်နေ့အထိ လာရောက်ရန်ရှိသော ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာဆိုင်ရာ လူ့အခွင့် အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တာနား ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါက ကချင်ဒေသကို စစ်ဆင်ရေးများ တိုးမြှင့် လာဖွယ်ရှိနေ သည်ဟု လေ့လာသူများက ခန့်မှန်းနေကြပါသည်။
“သူတို့ရဲ့ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာမှာ ရှိနေတဲ့ တချို့တပ်တွေကတော့ အပြင်းထန် တိုက်ခိုက်လိုတဲ့ စိတ်ရှိပုံ မရဘူး ဆိုပေမဲ့လို့ ကျသွားတဲ့ ကျနော်တို့ စခန်း (၂) ခုကတော့ အခုထိပြန်လည် မသိမ်းပိုက် နိုင်သေးပါဘူး”ဟု ဗဟိုတပ်မှူး တဦးက ဆိုပါသည်။
ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့၏ ရှေ့တန်းစခန်းတနေရာ (ဓါတ်ပုံ KIA)
KIO ၌ အစိုးရသုံ့ပန်း (၄၀)ခန့်ရှိပြီး အစိုးရကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များကိုပြောသော်လည်း အကြောင်းမပြန်ခဲ့ ပေ။ အစိုးရသည် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ် အခြေအနေကို လေ့လာရန် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တာနားအား ဖိတ်ကြားခဲ့သလို၊ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ စေလွှတ်ထားသော ငြိမ်း ချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) အဖွဲ့နှင့်လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေပါ သည်။
ဤကဲ့သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့်ကြားမှ KIO နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ယမန်နေ့ ၂၇ ရက်နေ့ အထိ တိုက်ပွဲပေါင်း ကိုးဆယ်ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စတင်တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့သည့် တနှစ်ကျော် အချိန်မှ ရေတွက်လျှင် တိုက်ပွဲပေါင်း (၁၆၇၀) ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကချင် စစ်ပြေးခြံများမှ ဒညှင်းသီး များကို မြန်မာအစိုးရစစ်သားများ ခူးယူ ရောင်းစားနေ
ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် လိုင်ဇာသွားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာဒေသခံများ၏ ဒညှင်းသီးခြံများတွင် မြန်မာအစိုးရစစ်သားများသည် အပင်ကိုခုတ်လဲပြီး အသီးများစိတ်ကြိုက် ခူးယူရောင်းစားနေကြောင်း ဒေသခံများ ပြောသည်။
အစိုးရထိုးစစ်ကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသော ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာသွားလမ်းရှိ ဂါးရာယန် (Ga Ra Yang)၊ ကစူးယန် (Katsu Yang)၊ ဒဘတ်ယန် (Dabak Yang)၊ ဂျာပူ (Ja Pu)၊ ဆမ်ပိုင် (Sambai)၊ အောင်ဂျာယန် (Awng Ja Yang) စသည့် ကျေးရွာ ၆ ခုမှ ဒေသခံများ စိုက်ပျိုးထားသော ဒညှင်းပင်များကို အိမ်ခြံဝင်းနှင့် ဒညှင်းခြံများမှ အပင်များကိုခုတ်လဲကာ ရောင်းစားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးပြောပြသည်။
“သူတို့က အသေးစိတ်တော့ မခူးယူဘူး။ အသီးပိုသီးတဲ့ အကိုင်းတွေကိုခုတ် အပင်လိုက်လိုက် သူတို့ကြိုက်သလို ခုတ်ယူတယ်။ သူတို့အဲလိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ အရမ်းနာတယ်လေ။ အပင် တစ်ပင်ကြီးလာအောင် ပျိုးထောင်ဖို့ ၇ နှစ် ၈ နှစ် စောင့်မှ အသီးသီးလာတာလေ။ အဲဒါတွေကို သူတို့ ပြန်ခုတ်ပေးလိုက်တော့။ အညောင့်ပြန်ထွက်လာရင်လည်း အသီးပြန်သီးဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ဘူးလေ” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။
ထိုကျေးရွာများမှ ဒေသခံ ရွာသားများသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လ မြန်မာအစိုးရမှ KIO အား စတင်ထိုးစစ်ဆင်လာချိန်ကတည်းက လုံခြုံရာ တရုတ်နယ်စပ်အနီး KIO ထိန်းချုပ်ဒေသများနှင့် ၀ိုင်းမော်မြို့များသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြသောကျေးရွာသားများဖြစ်သည်။
ထိုသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ဒေသခံများကို အာဏာပိုင်များက ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်ရုံးမှ ထောက်ခံစာဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာ အိမ်၊ ခြံများကို မကြာခန သွားကြည့်နိုင်ကြောင်းခွင့်ပြုထားခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာအစိုးစစ်သားများသည် ဒညှင်းသီးပေါ်လာချိန်မှစ၍ ရွာသားများ၏ အိမ်ဝင်း၊ ခြံများမှ ကြိုက်နှစ်သက်သလို ခုတ်ဖြတ်ခူးယူခဲ့သောကြောင့် ဒေသခံများ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ဒညှင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်သော်လည်း ၀မ်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်မလွယ်ကူတော့ကြောင်း ခြံပိုင်ရှင်တစ်ဦးပြောသည်။
“တချို့က ၃-၄ ဧက လုပ်တယ်။ တချို့က ၄-၅ ဧကလုပ်တာလည်းရှိတယ်။ ကျနော်တို့ရွာဆို အိမ်ဝင်းမှာလည်း ပတ်ပတ်လည်စိုက်ထားတာလေ။ ဧက လိုက်စိုက်တဲ့သူတွေက သိန်း ၆၀နဲ့ ၇၀ ကြားရတယ်။ အိမ်ဝင်းမှာစိုက်တဲ့သူတွေတောင် အနည်းဆုံး ၄-၅ သိန်းရတယ်လေ။ အခုက သူတို့ခူးပြီး ကျန်နေတဲ့ တစ်လုံး နှစ်လုံးကို နည်းနည်ပါးပါး ရရင်ရဆိုပြီး သွားခူးယူတာကို ၂ သောင်းရဖို့တောင်မလွယ်တော့ဘူး” ဟု ဒဘတ်ယန် (Dabak Yang) ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။
ဒေသခံများသည် မိမိတို့ကျေးရွာသို့ ထောက်ခံစာနှင့် နိုင်ငံသားကပ်ပြားများကို အစိုးရ ဂိတ် ၉ နေရာတွင်ပြကာ လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်ခွင့်ရသော်လည်း တစ်ခဏသာအချိန်ရသောကြောင့် ဒညှင်းသီးများကိုခူး ရောင်းချနေမည့်အချိန်လည်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ဒေသခံများမရှိသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အစိုးရအကျိုးတူများကသာ ထိုကျေးရွာတွင် လွပ်လပ်စွာသွားလာ၍ ဒညှင်းသီးများကို ခူးယူရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံမျက်မြင်တစ်ဦးပြောသည်။
“မ၀င်းက စစ်သားတွေ ခူးထားတာကို လိုက်ဝယ်နေတယ်။ ဂါးရာယန် နဲ့ဆန်ပိုင်လမ်းခွဲက တိုက်အိမ်မှာတော့ ဒညှင်းသီးအိတ်တွေဆိုအများကြီးပဲ ပွဲရုံလိုပဲ။ ကျနော်တို့က ၃ နာရီခွဲကနေ ပြန်ရတော့မယ်။ ဂိတ်မှာ သတင်းလာပို့ရတော့မယ်။ နောက်မကျရဘူးပြောတယ်။ မ၀င်းကတော့ မိုးချုပ်ရင်လည်း ထော်လာဂျီတွေနဲ့ သွားလို့ရတယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒီချိန်တွင် ဒညှင်းသီး အမျိုးစားအလိုက် ၁ လုံးလျှင် ၁၀ ကျပ်နှင့် ၁၅ ကျပ်ကြားတွင် ဈေးရှိနေကြောင်းသိရသည်။ ထိုဒေသသည် ဒညှင်းသီး၊ လိမ္မော်သီးများကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေသောဒေသဖြစ်၍ နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုးမှုထွန်းကားသော ဒေသလည်းဖြစ်သည်။